ဒေါင်းတမာန်: 06/07/2009 - 06/14/2009
ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ နာမည်ဆိုးနှင့့် ကျော်ကြားခဲ့သူများ
Ne Win and Than Shwe Killer...
Ne Win and Than Shwe
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, June 13, 20090comments
ကရင်ပြည်သူ့ ကံကြမ္မာ နအဖ နှင့် အမျိုးချင်းတူ ကရင်ခွဲထွက် လက်နက်ကိုင်များ က ဖန်တည်းလိုက်ပြီးနောက်မှာ
သန်းရွှေနဲ့ စစ်တပ်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးခြားတွေကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ် လူသတ်တယ် ရန်းကားကြတယ်လို့တဖွဖွ ဗမာပြည်တွင်းမှာ ၀ါဒဖြန့် ခဲ့ တာ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပါဘဲ။ တကယ်တော့ ပြည်တွင်းက ဒီအခြေအနေ အဖြစ်မှန်တွေ သတင်းအမှောင်ကျနေသ၍သိခွင့် ရကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသား တွေ ဗမာအပေါ်စိတ်နာတာ ဘယ်လောက်အထိခံပြင်းနေကြတာ ဤကဲ့ သို့ အလားတူ အဖြစ်မှန် ဗီဒီယိုဖိုင် တွေ အင်တာနက်ဆိုက်တွေမှာ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။(ဒေါင်းTM)
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Friday, June 12, 20090comments
ပြည်သူ့ ကံကြမ္မာ ပြည်သူဖန်တည်းမှာလား စစ်တပ်က တသက်လုံး ဖန်တည်းသွားမှာလား?
နိုင်ငံရေးလက်ဦးမှု လက်မလွတ်ရေးTuesday, June 09, 2009
မင်းချမ်း ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၀၉။
ယခုတလော မြန်မာ့သတင်းလောကမှာ ထ်ိပ်တန်းရောက်နေတဲ့ သတင်းနှစ်ပုဒ်က နေရာယူထားပါတယ်။ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်သက်တန်း ပြည့်လုနီးပါး လွတ်မြောက်ခါနီးမှာ စစ်အစိုးရက တမင်အကွက် ဆင်ပြီး ထောင်ချမဲ့အခြေအနေ သတင်းများနဲ့ စစ်အစိုးရက အပစ်ရပ်၊ ငြိမ်းလက်နက်ချတပ်ဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းလဲဖို့ တိုင်းရင်းသားဒေသ အသီးသီးကိုသွားရောက်ပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေထံကို ကျားကုတ်ကျားခဲ လိုက်လံတိုက်တွန်း တောင်းဆိုနေတဲ့ သတင်းတွေပါ။
ဒီသတင်းတွေကလည်း နာတာရှည်ရောဂါသည်လို ဖြစ်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရှေ့ခရီးကြမ္မာတရားအတွက် တကယ့်ကို အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေပါ။ နအဖတို့ထင်ရာစိုင်းတဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မနိုင်ဆိုတာကို မဝေးတော့တဲ့ ကာလတို အတောအတွင်းမှာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲက နအဖဖက်က လွယ်လွယ်နဲ့တွက်ဆခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မဟုတ်မဟတ်လုပ်ဇာတ်ခင်း၊ ကလေးကလားဆန် အောက်တန်းကျလှတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လက်တွေ့မှာတော့ နအဖအနေနဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖက်ဖက်က နိုင်ငံတကာအစိုးရများနဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားပေးတုန့်ပြန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။
အခုတလော မြန်မာအရှေ့မြောက်ဖက်က အင်အားကြီးအပစ်ရပ် အဖွဲ့များကလည်း နယ်ခြားတပ်ဖွဲ့ ဖွဲစည်းရန် အချိန် မတန်သေးဘူးလို့ စစ်အစိုးရထံ တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ အကြောင်းပြန်လာတော့ စစ်အစိုးရဟာ သူ့ကိုယ်သူဟုတ်လှပြီ ထင်နေခဲ့တာ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့ပါ။ နေပြည်တော်ကလည်း ဒုတိယအကြိမ် သွားပြောလို့ ဆိုပြန်ရော။ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်က မဖြစ်နိုင်မှန်း၊ လက်မခံနိုင်မှန်းသိရက်နဲ့ ထပ်ပြောဆိုလဲ ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားပြီး ဆေးခါးဂါထာဟောင်းကို သွားရွတ်ပြရပြန်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဗူးဆိုတာ ဖယုံသီးမဟုတ်ပါ။ ပေါက်ဖေါ်တရုပ် ကိုလည်း ဝိုင်းပြောပေးဖို့ ဥပဒေအထက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း အလျှင်အမြန်သွားရောက်နေပါတယ်။
နယ်ခြားတပ်ဖွဲ့ဆိုတာကကော ဘယ်လိုဖြစ်လာကြမလဲ၊ မိမိအမျိုးသား တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေး ကျွေးကြော်သံနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ခရီးတလျှောက်လုံးမှာ နှစ်အတန်ကြာ ဘဝကိုမြှုပ်နှံ၊ အသက်ချွေး၊ သွေးတွေနဲ့ရင်းပြီး တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်အချို့က နအဖရဲ့ ကျောသပ်၊ မြှောက်စားမှုကို ခံယူတော်မူပြီး ကိုယ်အမျိုးသားအချင်းချင်း ပြန်တိုက်၊ ပြန်သတ်နေကြတဲ့အထိ ဖြစ်လာနေတာကို တွေ့ကြုံနေရပါပြီ။ မူလရည်မှန်းခဲ့တဲ့ ပန်းတိုင်နဲ့ လက်တွေ့ဘဝ ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲ၊ တစ်ဝမ်းစား တစ်ခါးလှ ဖြစ်သွားတာကို ပန်းတိုင်လို့ ဆိုလိုချင်ပါသလား။
အထူးသဖြင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုယ်တို့ အခုလက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေဆဲ ကရင်အချင်းချင်း သတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ လုံးဝမဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေပါ။ ကရင်ပြည်သူတွေသာမက ဒေသခံတိုင်းရင်းသားအားလုံး ဒုက္ခရောက်နေကြရပါပြီ။ လောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ KNU နဲ့ DKBA တိုက်ပွဲတွေဟာ နယ်ခြားတပ်ဖွဲ့အဖြစ် စစ်အစိုးရအလိုကျ DKBA တပ်ဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တွေလက်ခံလိုက်ကြတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပြဿနာတွေ တသီကြီး လိုက်ပါလာပါတော့တယ်။
သတ်မှတ်ဦးရေပြည့်မီအောင် အင်အားတွေကို မရမက မဖြစ်မနေ အတင်းလိုက်လံဖြည့်ဆည်းနေရပါတယ်။ တရားဝင် လိုင်စင်ရထားသလို ကရင်ကျေးရွာ အနှံ့အပြားတွေမှာ မဲစနစ်နဲ့ တပ်သားသစ်တွေကို အတင်းကောက်ယူနေပါတယ်။ လူငယ်တွေက နယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးကြရပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ လစာက တစ်လ မြန်မာကျပ်ငွေ နှစ်သောင်းခွဲ ၂၅၀၀၀ိ/ ဆိုတော့ ဒီခေတ်မှာ အဘယ်သို့သော ကရင်လူငယ်များကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်မှာလဲ၊ ကရင်အချင်းချင်းကို သတ်ခိုင်းနေတဲ့ တပ်ဖွဲ့ထဲ မည်သို့သောလူငယ်တွေက ပါဝင်လာမှာလဲ။
စစ်အစိုးရတပ်တွေမှာ တပ်ပြေးတွေ အလွန်များနေပါတယ်။ တပ်ရင်းတွေ၊ အရာရှိတွေသာများနေပြီး အောက်ခြေ တပ်သားများ စုဆောင်းရာမှာလည်း အခက်တွေ့လာနေတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ တစ်ရွာတစ်ယောက် စစ်သား စုဆောင်းရေးဟာလည်း လက်တွေ့မှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတပ်တွေထဲ ဗမာ့တပ်မတော် အရာရှိတွေ အော်တိုမက်တစ် ထည့်လိုက်ရင်ဆိုပဲ ဒီတပ်သားသစ် စုဆောင်းရေးကိစ္စရော၊ ဘာညာဘာညာ အရာအရာ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ သပွတ်အူကို တစ်ချက်ခုတ်လိုက်ယုံနဲ့ သုံးလေးပိုင်း ပြတ်သွားပါလေရော။
နယ်ခြားစောင့်တပ် Border Guard Force ဆိုတာ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားပြုအမည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ စစ်သင်းချိုင်းတွေပါပဲ၊ ဒီတပ်ဖွဲ့ကို အသွင်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ DKBA, KPF, KNU/KNLA- PC ဆိုတဲ့ ကရင်မျိုးချစ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ မူလအမည်တွေ အတိတ်မှာချန်ရစ်ထားခဲ့ပြီး BGF ဆိုတဲ့ နယ်ခြားစောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သွားရမှာပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ အခြားတိုင်းရင်းသားတပ်တွေဟာလဲ ဒီလမ်းကိုလျှောက်ရင် ဒီပုံစံ၊ ဒီအချိုးအတိုင်း ဖြစ်လာမှာပါပဲ။
စီးပွားရေးအရ အင်မတန်နိမ့်ကျနေရတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ငွေစက္ကူတွေ အတင်းရိုက်ထုတ်ပြီး လူငယ်တွေကို စစ်တပ်ထဲ အတင်းသွပ်သွင်းနေတာတာ စစ်အစိုးရမှာ မရိုးသားမှုသားတဲ့ အကြံအစည်တစ်ရပ် ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဟိုဟိုဒီဒီ လိုက်တွေးနေစရာမလိုပါ။ တိုင်းတစ်ပါးရဲ့အန္တရာယ်၊ အခြားကျူးကျော်စစ်တို့ရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေ ဘာမှလည်း အရိပ်အရောင်မတွေ့မိပါ။ အလားအလာတွေလည်းမရှိတော့ ဘာအကြံအစည်တွေများပါလိမ့်။ အဖြေက ဝေးဝေးကို တွေးကြည့်စရာမလိုပါ။ ကရင်ကို ကရင်အချင်းချင်း၊ မွန်ကို မွန်အချင်းချင်း၊ မျိုးနွယ်တူ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းကို သတ်ဖြတ်ခိုင်းတာပါ၊ နောက်တစ်ဆင့်မှာ မျိုးနွယ်မတူ တိုင်းရင်းသားတွေ ဆက်ပြီးသတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြဖို့ မဟာ ဗမာဝါဒီ စစ်အစိုးရရဲ့ မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဆိုတာ သတိချပ်စေလိုကြောင်း။
၂၀၁၀ မတိုင်မှီ ကရင်လက်နက်ကိုင်များအား အဆုံးစီရင်ရန်
ကရင်တော်လှန်ရေးတပ် အား ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီ အပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ရန်
Publish at Scribd or explore others: knu karan army Burma
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Thursday, June 11, 20090comments
တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသူ ဦးဇော်ညွန့် အင်းစိန်ထောင်တွင် ရှိနေ
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, June 10, 20090comments
ထိုင်းဘက်ကမ်းသို့ ထွက်ပြေးလာသူများ အခက်အခဲ ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရ Tuesday, 09 June 2009 18:30 ဖြိုးကြီး ရိုးမ သတင်းစာမျက်နှာမှ
ဒီကေဘီအေ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍
ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး. ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
ရက်စွဲ - ဇွန်လ (၈)ရက်။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်။
(၁) ဒီကေဘီအေ ဟု စတင်ပေါ်ထွန်းလာချိန်မှစ၍ ယခုအထိ အခြေအနေမှန်များကို
ပြန်ကြည့်လျင်စစ်အစိုးရမှဒီကေဘီအေကို ကရင်အချင်းချင်း ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွင်
အသုံးချခဲ့သဖြင့် ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ ဝင်များကိုယ်တိုင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာမိသားစုများ အလွန်တရာ
(၂) ဒီကေဘီအေ ခေါင်းဆောင်နှင့်နောက်လိုက် ဒီကေဘီအေအဖွဲ့ ဝင်များအကြား မတူညီသော
အခွင့်အရေးများ ပေးသဖြင့် ဒီကေဘီအေ အတွင်း ဝင်ငွေရှိသူနှင့် မရှိသူ။ အခွင့်အရေးရသူ
နှင့်မရသူ။ အမှန်တရားကို ထိမ်းသိမ်းသူနှင့်မိုက်မဲရမ်းကားသူများအကြားအမြင်။ အယူအဆ။
စာရိတ္တများ ကွဲပြားလာပြီး ဒီကေဘီအေအချင်းချင်းညီညွတ်မှုလည်း အားနည်းလာခဲ့ပေသည်၊
(၃) ဒီကေဘီအေ အနေဖြင့် အစဦးတွင် ကရင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမွေအနှစ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း။ ကရင်ပြည်သူလူထုကို နအဖ တို. ဖိနှိပ်ရမ်းကားမှုများကို တစုံတရာအကာအကွယ်ပေးဘို
့ ကြီုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းများရှိခဲ့သည်မှန်သော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ
့အတွင်း ကရင်မဟုတ်သောတပ်ဖွဲ့ ဝင်များပိုများလာသည့်ဖြစ်စဉ်သည် ကရင့်အမျိုးသားများ
ပပျောက်ရေးနှင့် ဒီကေဘီအေ အသိုင်းအဝိုင်းတခုလုံးကိုနအဖ စစ်အာ၏တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ 
အလျှင်အမြန်သွပ်သွင်းနေကြောင်း ထင်ရှားသောအထောက်အထားတရပ်အဖြစ် တွေ့ ရှိနိုင်သည်၊
(၄) ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် တရားဝင်ခိုင်မြဲရေးအတွက် ဒီကေဘီအေ
အပါအဝင် ငြိမ်းအဖွဲ့ များ။ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ များကို ဖျက်သိမ်းပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ များအဖြစ် နအဖက ပြောင်းလဲဖွဲ့ စည်းတော့မည်ဖြစ်ရာ ဒီကေဘီအေသည်လည်း ဖောင်စီးရင်းရေငတ်ဘဝမှ နအဖ. လှည့်ကွက်ပရောဂကြောင့် နအဖ၏ ကျွှန်သဘောက်ဘဝသို့ လုံးလုံးလျားလျား ကျရောက်သွားရတော့မည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်နေပြီးဖြစ်သည်။
(၅) ယခုအခါတွင်ဝတပ်ဖွဲ့ UWSA။ ကိုးကန့် နှင့် SSAမြောက်ပိုင်း အပစ်ရပ်အဖွဲ့ များက
မိမိတို့အမျိုးသား ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်များ မဆုံးရှုံးရအောင် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်
လက်တွဲ၍ သီးခြားရပ်တည်နိုင်ရေး နအဖ.ကျွှန်သဘောက်မဖြစ်ရေးအတွက် ရပ်တည်လုပ်
ဆောင်မှုများကို ဒီကေဘီအေအနေဖြင့် များစွာနမူနာယူသင့်သည်။
(၆) မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေဖြင့် ဒီကေဘီအေ
အဖွဲ့ ဝင်များနှင့် မိသားစုများ.လက်ရှိ အခြေအနေကို များစွာစိုးရိမ်ခြင်း ဖြစ်မိသည်နှင့်အညီ အခြေအနေ
တရပ်လုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကရင်အမျိုးမပျောက်ရေးနှင့် ကရင်တမျိုးသားလုံး ကရင့်တော်လှန်ရေး
အလံတော်အောက်တွင် တစုတစည်းတည်းစည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်သူများမှ
(၇) ဒီကေဘီအေ အနေဖြင့် မိမိအဖွဲ့ အစည်း. ရည်မှန်းချက်နှင့် လက်ရှိဖြစ်ရှိနေသည့်
အခြေအနေမှန်များကို ပကတိအတိုင်း သုံးသပ်ပြီး ကရင်ပြည်သူအသံကို နားထောင်ကြ၍ ကရင်ပြည်
သူများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် ရပ်တည်ကြရန် အချိန်တော်ပြီးဟု ဆော်သြလိုက်သည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Tuesday, June 09, 20090comments
၁၉နှစ်ပြီးသွားပြီ နောက်အနှစ် တစ်ရာလည်း အမေစုပါဘဲ သန်းရွှေလိုသိက္ခာမျိုးနဲ့ မသေပါ
နောက်အနှစ် နှစ်ဆယ်လား? ယောင်ဝါးဝါး မသေချာ မရေရာသတင်းတွေကြားနေရတယ် .....အမေစုကို ထောင်ထဲမှာထားဖို့အတွက်အပြာနုရောင် နှစ်ထပ်တိုက် တခုကို တည်ဆောက်ခဲ့တာ ၁၉၉၅ ကတည်း ကတဲ့ ..ကြိုးစင်နဲ့ အနီးမှာတဲ့ ... အခုဒီနေ့ကြားရတာက အမေစုကို ထူးမခြားနား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြန်ချမယ်တဲ့ ... အဲ့ဒီအတွက် နေရာအသစ်ရှိတယ်တဲ့....အမေဟာ ၁၉နှစ်တာကာလ ဘာမှမလုပ်ရဘဲ ထောင်ကျခဲ့ရတယ် လူ့ ဘ၀သက်တန်းဟာ အနှစ်တရာဆိုတာ ခဏတာပါ ..ဗမာပြည်မှာ တရားဥပဒေဆိုတာမရှိပါဘူး.. လူတယောက်အာဏာစက် ကြောင့် ကျခံရမယ့် ဥပဒေ အမေခံနေရတယ် ။ အမေဟာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သိက္ခာနဲ့ အမှန်တရားကို ဖက်ပြီး အသက်စွန်းပြီး နေသွားမှာကိုယုံကြည်ပေမယ့် အမေ စုအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ရပ်တည်ပေးကြပါလို့ ။
(ဤဓါတ်ပုံမှာ Yahoo image search မှ ရခဲ့တဲ့ပြုံဖစ်ပြီး ဓါတ်ပုံရှင်ငယ်ရဲ့အမည်ကို မသိပါ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ စိတ်နဲ့ အမေစုပုံ ကိုင်ထားတဲ့အနေအထား တကယ်ပင် ကြိုက်နှစ်သက်၍ တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲဝင်ပါက ဤပုံကို ကျွန်တော့အနေနှင့် မဲ ၁ ပေးပါမည်။)
တချိန်က ဂျပန် ဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ ရန်သူ အခု ဂျပန် ပြည်သူတွေ ဆုတောင်းပေးနေကြတာက
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Monday, June 08, 20090comments
ခေါင်းဆောင် (၆) ဦးအား အိန္ဒိယ စစ်တပ်မှ သွေးအေး အေးဖြင့် လုပ်ကြံ
ကာလကတ္တားထောင်ထဲရှိ ရဲဘော် ၃၄ ဦးအမှုကို ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကြားနာ စစ်ဆေးမည်
ကာလကတ္တား အကျဉ်းထောင်ထဲရှိ ရခိုင်နှင့် ကရင် ရဲဘော် ၃၄ ဦးအမူကို ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆက်လက် ကြားနာ စစ်ဆေးမည် ဖြစ်သည်။
ယခု ရုံးချိန်းတွင် အိန္ဒိယစစ်ထောက်လှမ်းရေး CBI မှ တရားလို သုံးဦးအား ဆက်လက် စစ်ဆေးနိုင် ဖွယ်ရှိသည်ဟု သူတို့အမှုကို လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နေသူ တဦးက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း သူတို့အမှုအား လက်ခံ စစ်ဆေးနေသူ တရားသူကြီးမှာ ရာထူးတိုးသွားသဖြင့် တရားခွင်သို့ လာရောက်နိုင်မှ လာရောက်နိုင်မည်ဟု အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။ တရားသူကြီး တရားခွင်သို့ မလာရောက်နိုင်ပါက အမှုကို နောက်ထပ် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းရနိုင်ဖွယ် ရှိသည်။
တရားခွင်တွင် တရားလို သုံးဦးအား စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးမှသာ တရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲခံထားရသူ ရခိုင်နှင့် ကရင် ရဲဘော် ၃၄ ဦးအား ဆက်လက် စစ်ဆေးမည် ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်ထိ တရားခံအဖြစ် တရားစွဲဆိုခံထားရသူ ရခိုင်နှင့် ကရင်များအား တရားခွင် ထုတ်လာရုံမှ အပ စစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်းများ မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရခိုင်နှင့် ကရင် ရဲဘော် ၃၄ ဦးမှာ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဗိုလ်ရာဇာနှင့် အတူ အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေး မှ အန္ဒမန်ထဲမှ ကျွန်းတကျွန်းတွင် ရေတပ် အခြေစိုက် စခန်း တည်ဆောက် ပေးမည်ဟု ခေါ်ယူလာခဲ့ သဖြင့် လိုက်ပါလာရာမှ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရသူများ ဖြစ်သည်။
သူတို့အား ဦးဆောင်သူ ဗိုလ်ရာဇာ အပါအ၀င် ခေါင်းဆောင် (၆) ဦးအား အိန္ဒိယ စစ်တပ်မှ သွေးအေး အေးဖြင့် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ၄င်းအပြင် တပ်သားအဆင့် ရှိသူ ရခိုင်လူငယ် ကိုရန်နိုင်နှင့် ကရင်လူငယ် တဦးကိုလည်း ပေါ့ဘလေယားမြို့တွင် အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေးမှ လုပ်ကြံ ပစ်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ စစ်တပ်မှ အဆိုပါ လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်ပြီးနောက် အစိုးရမှ တခါ ကျန်ရှိသော ရဲဘော် ၃၄ ယောက်ကိုပါ မတရားသဖြင့် နှစ်ရှည် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားသဖြင့် အိန္ဒိယအစိုးရ လုပ်ရပ်အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက အပြင်းအထန် ဝေဖန်လျက်ရှိသည်။
ပြည်ပရောက် နောင်တော်များ စေတနာရှင်များ ဗမာစစ်ဒဏ်ခံနေရသူ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများအား ကူညီကြပါ ဖေးမကြပါရန်။
ဇွန်လ ၈၊၂၀ဝ၉ ခုနှစ်(တပ်မဟာ-၇)နော်ဖော့ဂေ(ကေအိုင်စီ)
နအဖ တပ်မ(၂၂)လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ရင်း(၈၁)။တပ်ရင်း(၂၀၂)။တပ်ရင်း(၂၀၅) ပူးပေါင်း စစ်ကြောင်း(၄)ကြောင်း နှင့်
ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၉၉၉)အထူးတပ်ရင်း(ဆန်ပြုတ် ဦးစီး) တို့ သည် ကေအဲန်အယ်အေ တပ်ရင်း(၂၂)(၁၀၁)တည်ရှိရာ လယ်ပေါ်ဟဲ စခန်းသိုဏ္ဍတိုက်ခိုက်ရန် တာဝန်ယူရ၊
ခလဲ့ဒေးစခန်းထိုင် နှင့် တပ်မဟာ(၅၅၅) ဒီကေဘီအေ ဗဟိုလုံခြုံရေးတပ် မှ ကေအဲန်အယ်အေ တပ်ရင်း(၂၁) မဲတရိ သို့တိုက်ရန် တာဝန်ယူရ၊
တပ်မ(၂၂)လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း(၂၁၀)။ ရှမ်းရွာသစ် စခန်းထိုင် နှင့် ဒီကေဘီအေ(၅၅၅)တပ်မဟာ။ ဗဟိုလုံခြုံရေးတပ်မှ ကေအဲန်အယ်အေ တပ်ရင်း(၂၀၁) မိအေးပူသို့တိုက်ရန် တာဝန်ယူရ၊
• ဇွန်လ(၂)ရက်နေဏ္ဍတွင် ဝါးမီကလား(နိုဘောကျောတွင်)ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်။ ဆွဲမိုင်းထိ၊
ခလရ(၈၁)တပ်ရင်းနှင့် ကေအဲန်အယ်အေ တပ်ရင်း(၂၂)တပ်ခွဲ(၃) တို့ မှဖြစ်၊
• ဇွန်လ(၄)ရက်နေဏ္ဍတွင် ခလဲ့ဒေးနှင့် ခလဲ့ခိုအကြားမောဖိုးကလိုးတွင် ဒီကေဘီအေ ဗဟိုလုံခြုံရေးတပ်နှင့် ကေအဲန်အယ်အေ တပ်ရင်း(၂၁) ခွဲ(၁)တို့ နှင့် မဲတရိစခန်းသို့တက်ရောက်အလာ တိုက်ပွဲဖြစ်၊
• ဇွန်လ(၄)ရက်နေ့တွင် မဲသဝေါကျေးရွာ ဖွေးဖိုးကုလားတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်၊
• ဇွန်လ(၅)ရက်နေဏ္ဍတွင် ခလဲ့ဒေးမှနေ လက်နက်ကြီးများ လှမ်းပစ်၊
• ဇွန်လ(၅)ရက်နေ့ညနေ (၄းဝ၀)နာရီးအချိန်တွင် လယ်ပေါ်ဟဲစခန်းသို့ ဒီကေဘီအေမှ လက်နက်ကြီး
• ဇွန်လ (၅)ရက်နေ့ညနေ(၄း၁၀)နာရီတွင် ကေအဲန်အယ်အေ တပ်ရင်း(၂၀၁)တပ်ခွဲ(၃)နော်တ သို့နအဖမှ (၆၀)မမ ဖြင့် လှမ်းပစ်၊
• ဇွန်လ(၆)ရက်နေဏ္ဍ နေ့ လည် (၁၂း၃၀)နာရီတွင် လက်နက်ကြီး(၈၁ မမ)ဖြင့် အလုံး ၃၀ကျော်ခန့် လှမ်းပစ်ခတ် (တပ်ရင်း ၂၂။ ၁၀၁။ လယ့်ဘော်ဟဲနေရာများသို့ )
• ဇွန်လ(၆)ရက်နေဏ္ဍ ညနေ (၄း၂၀)မှ (၆းဝ၀)နာရီအထိ လယ့်ဘော်ဟဲဂွင် ထီးမိုကလိုးနေရာတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၊ ထိခိုက်မှုအတိအကျ မရရှိသေး၊
• ဇွန်လ(၆)ရက်နေဏ္ဍ ည (၈)နာရီဝန်းကျင်ခန့် တွင် ထီးမိုကလိုးအောက်နာ့း ဗုံးထပေါက်သံကြား၊
• ဇွန်လ (၆)ရက်နေဏ္ဍတွင် ထိုင်း အမှတ်(၃)တပ်မမှုး ထနွန်ဆာဆာဖိလာ့ယိုထဲင် အပါအဝင် တာ့ခ်ခရိုင် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများက နိုဘိုးဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ ဒုက္ခှသည်များအား လာရောက်ကြည့်ရှု
မိုးကာ။ ဆေးလိပ်။ ကွမ်းသီး။ ခြင်ဆေးရည်။ ရိက္ခှာခြောက်(ဘလခြောင်ကျော်။ မာမား။ ငါးသေတ္တာ)
အထက်ပါ အကြောင်းအရာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခုအချိန်တွင် DKBAနှင့် ဗမာစစ်တပ်တို့ပူးပေါင်းပြီး ကျနော်တို့ တပ်မဟာ(၇) နယ်မြေနှင့် ဌာနချုပ်အားလာရောက် ထိုးစစ်ဆင်နေပါသည်၊
၄င်း တို့ရည်ရွယ်ချက်မှာ တပ်မဟာ(၇) နယ်မြေအားလုံး ရှင်းလင်း ရန်နှင့် ကေအဲန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်အား ရှင်းလင်းရန် အတွက်ဖြစ် ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကရင်ပြည်သူလူထု အမြောက်အများ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာကြရသည်၊ ထို့ကြောင့် ယခုအ ချိန်တွင် ပြည်သူလူထုအား ကူညီစောက်ရှောက်ရန်နှင့် ကေအဲန် အယ်လ်အေတပ်သားများအား ထောက်ပံ့ရန်အတွက် အရေးကြီး လိုအပ်နေပါသည်။
ထောက်ပံ့ရန်အတွက် (အစားအစာ၊ မိုးကာ။ ဆေးဝါး၊ ခြင်ဆေး၊ ဆေးလိပ်)စသည့်အရေးပေါ် အကူညီများလို အပ်နေပါသည်၊ ထို့ကြောင့်မျိုးချစ် ကရင်လူငယ်များနှင့် ခေါင်း ဆောင်များ အကူအညီအား အရေးပေါ်လိုအပ်လျက် ရှိနေပါ သည်၊ ထို့ကြာင့် အမျိုးသားသမိုင်းပေးတာဝန်ကို ဝိုင်းဝန်းထမ်း ဆောင်ကြပါရန် မေတာရပ်ခံအပ်ပါသည်၊
KAREN YOUTH ORGANIZATION (Kaw Thoo Lei)
P. O. Box -105, Mae Sot, Tak 63110, Thailand. Email: kyohqktl@yahoo.com
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Sunday, June 07, 20090comments
ကုလားမနိုင်ရခိုင်မဲ မဲနေသော နအဖ နှင့်ခွေးမြီးစွဲတပ်
မိန်းမယုတ် စိန်ဖူးတော်တင်လိုက်သည့် ဘုရား ဤသို့ကြိုင်ကြိုင်ပုံထွက်လာ
၀ိုးတ၀ါး ဓနုတ်ပုံရိပ် -- ၀င်းပေါ်မောင်
ဇွန် ၆၊ ၂၀၀၉ ၂၀၀၉ မေ ၃၀ ရက်နေ့က ပြိုကျသည့် ဓနုတ်စေတီ
လူကိုတိုက်လို့ ရချင်ရမယ် ရွာတွေမိးရှို့ လို့ရချင်ရမယ် စိတ်ဓါတ်တွေကို တော့
ပုံစာ။ ။ ကရင်ပြည်နယ်တနေရာမှ လက်နက်ကိုယ်စီဖြင့် တွေ့ရသော KNU တပ်သားတချို့ (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
ယင်း ကရင်ဒုက္ခသည်အများစုမှာ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့ နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် အတွင်းရှိ မဲ့သဝေါနှင့် မဲ့သလေမြို့နယ်များသို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိ လာကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။